सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक डन्ड्रफ उपचार ए-होम - कपाल
Best उत्तम प्राकृतिक डान्ड्रफ उपचार ई-होम प्रयास गर्नका लागि
लामो कपाल को लागी अगाडि कट हेयरस्टाइल
तपाईं भएको छ तीबाट छुटकारा पाउन प्रयास गर्दै केही समयको लागि अप्ठ्यारो फ्लेक्स, तर ती जसो भए पनि तपाईंको काँधमा देखा पर्दछन्? डन्ड्रफ एक व्यक्तिको आत्मविश्वासमा वास्तविक प्रहारको अलावा, वास्तवमा एकदम असुविधाजनक हुन सक्छ तर केही घरेलु उपचारहरूको साथ बिना समस्याको उपचार गर्न सकिन्छ।
रूसीका कारणहरू धेरै हुन सक्छन्, खुजली वा चिल्लो टाउकोको लागि अग्रणी, र कहिलेकाँही हठ्ठी र निराश निराशाजनक व्यवहार गर्न को लागी व्यवहार गर्न सक्छन्। यो सम्झन मद्दत गर्दछ डन्ड्रफको कारण सामान्यतया ब्याक्टेरिया वा फंगल हो र त्यस हिसाबले व्यवहार गर्न सकिन्छ।
हामी तपाईंलाई आठ उपायहरू दिन्छौं जुन तपाईं यस अठोट अवस्थाको साथ तपाईंको लडाईमा मद्दत गर्न घरमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
१ Apple Cider Vinegar
3 रस / तेल लिनुहोस्
चार हर्वल चिया
। नरिवल तेल / दूध
।। कागतीको रस
।। एन्टिसेप्टिक तरल
9 At-Home Dandruff Remedies FAQs
एन्टि-बैक्टीरियलसँगसँगै, एप्पल साइडर सिरका (ACV) ले frizz लाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छ र तपाईंको कपालमा ओसिलो र जीवन प्रदान गर्दछ। यो डन्ड्रफलाई रोक्ने उत्तम र सब भन्दा सुविधाजनक सामग्री मध्ये एक हो भनिन्छ।
यसलाई प्रयोग गर्न डन्ड्रफको उपचार गर्नुहोस् , बस पानी र एसीभी को बराबर भाग मिक्स र धुनु कपाल यो मिक्स मा साबुन। यसलाई तपाईंको स्क्याल्पमा बिस्तारै मालिश गर्नुहोस् र यसलाई १ minutes मिनेटको लागि बस्न दिनुहोस्, त्यसपछि यसलाई कुल्नुहोस्। यसलाई १ 15 मिनेट भन्दा लामो समयसम्म नराख्नुहोस्, यद्यपि यसले तपाईंको कपालको तेलमा फुत्काउन थाल्छ र काउन्टर उत्पादक बन्न सक्छ। यो भिजाउने हप्तामा दुई पटक गर्न सकिन्छ।
सुझाव: तपाईं नियमित सेतो सिरका पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, ACV ले थप फाइदाहरू थपेको छ।
तपाईंलाई पहिल्यै नै भनिसकिएको छ कि दहीले डन्ड्रफमा अचम्मलाग्दो काम गर्दछ घरको एक उपचार। दहीमा रहेको ब्याक्टेरियाहरूले डान्ड्रफ-कारकहरूलाई वशमा गर्न सक्दछन्। यसले ब्याक्टेरियासँग मात्र लड्न सक्दैन, तर यसले तपाईंको कपाललाई पोषण दिन पनि सक्छ र यसलाई चम्किन्छ।
दहीलाई तपाईंको कपालमा सिधा लागू गर्नुहोस् र यसलाई धुने अघि आधा घण्टादेखि एक घण्टासम्म बस्न दिनुहोस्। यो तपाईंको कपालको चिन्ताको आधारमा अन्य सामग्रीसँग मिसिन सकिन्छ जस्तै सुक्खा कपालको लागि मह, निम्बू, स्याउ साइडर सिरका, आदि।
सुझाव: दही कपालको मास्कको रूपमा केही गडबड हुन सक्छ, आफ्नो काँधमा तौलियाले कभर गर्नुहोस्, र यस्तो कपडा लगाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं फोहोर मान्नुहुन्न।
रस / तेल लिनुहोस्
आयुर्वेदले नीमलाई विश्वव्यापीको रूपमा मान्यता दिन्छ चale्गाइ गर्ने वा निको गर्ने र कारण भित्र। नीमको तेल एन्टिसेप्टिक, एन्टिवाइरल, जीवाणुरोधी, र एन्टिफंगल गुणहरूको साथ अत्यन्त शक्तिशाली हुन सक्छ। ड्यान्ड्रफ निम्त्याउने ब्याक्टेरियाहरू र फ t्गीको सामना गर्ने साथसाथै, यो तेलले रूसीको विघटनलाई शान्त पार्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ। यो अन्य कपाल तेलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर बेस तेलमा पातलो हुनु पर्छ।
तपाईं नीमको पात कुचेर पनि रस बनाउन सक्नुहुन्छ, पेस्टलाई केही पानीमा पातलो पार्दै, र यसलाई तानेर। धेरै पानी प्रयोग नगर्नुहोस्। यस मिश्रणमा कपाल भिजाउनुहोस्, स्क्याल्पमा ध्यान केन्द्रित गर्दै र १०-१-15 मिनेटमा यसलाई छोड्नुहोस्। यो कुल्ला गर्न धेरै सजिलो छ।
सुझाव: नीमको एकदम कडा गन्ध हुन सक्छ, यसको लागि तयार हुनुहोस्।
हरियो केवल आफ्नो दिमाग र शरीर को लागी अनुपम छैन, यो तपाईंको कपाल को लागी पनि उत्तम हो। यसको एन्टिआक्सीडन्टहरू र पोषक तत्वहरूको साथ, हरियो चिया रिन्सेसले कपालको बृद्धिलाई बढावा दिंदा डन्ड्रफसँग लड्न सक्छ।
हरियो चियाको एक बलियो कप पेस गर्नुहोस् र यसलाई चिसो दिनुहोस्। तपाईंको कपाल धुने पछि, यो चियामा कपालको लम्बाईसहित तपाईंको टाउकोलाई भिजाउनुहोस् र यसलाई कुल्नु अघि आधा घण्टा बस्नुहोस्। कपालमा सजिलो अनुप्रयोगको लागि तपाईं स्प्रे बोतल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सुझाव: अलिकता मह थपिनाले कपाललाई मसिश्चराइज गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, यसलाई उछाल र चमकदार बनाउँदछ।
मेथीको दाना, जसलाई भारतीय भान्साकोठामा चिनिन्छ मेथी , अचम्मको कुरा हुन सक्छ डन्ड्रफको बिरूद्ध प्रभावकारी । तीनिहरूलाई निवारक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर कुनै परिणामहरू प्राप्त गर्न प्रक्रिया अनुसरण गर्न आवश्यक छ।
बीजलाई कम्तिमा दुई घण्टा वा रातको लागि सोख्न दिनुहोस्। एक चम्चा चम्चा एकल प्रयोगको लागि पर्याप्त हुन सक्छ। त्यसपछि बीजलाई टाँस्नुहोस् जस्तो पेस्ट जस्तो स्थिरतामा, तपाईं ब्लेन्डर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यसपछि केही दही वा निम्बूमा मिश्रण गर्नुहोस् कपालमा लागू गर्नु अघि। यसलाई आधा घण्टाको लागि छोड्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई धुनुहोस्।
सुझाव: यो कपाल बाहिर सफा गर्न गाह्रो हुन सक्छ। यो निश्चित रूपमा टाँस्न तपाईलाई राम्रोसँग मॅश गर्नुहोस्।
नरिवल तेल / दूध
नरिवल तेल एक हाइड्रेटरको रूपमा प्रचलित, विशेष गरी कपालको लागि। नरिवल तेल वा दूधले डन्ड्रफको प्रभावहरू कम गर्न सक्छ र यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्दछ, एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरू भएको। तिनीहरू तपाईंको हावा छोड्न बाध्य छन् धेरै स्वस्थ देखिन्छु ।
आधा घन्टा धुनु भन्दा अघि वा रातभरको लागि कपालको मास्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सफा गर्न सजिलो भएकोले नरिवलको दूध पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। दही जस्तै, नरिवलको दूधले मह जस्तो सामग्रीको लागि आधारको रूपमा काम गर्न सक्दछ।
सुझाव: हप्ताहरूमा नारियलको तेलको लगातार प्रयोग खोपडीबाट डन्ड्रफलाई हटाउनको लागि महत्वपूर्ण छ।
यसको अम्लीय गुणको साथ, कागतीले रूसीको लागि जिम्मेवार निकायहरूलाई भत्काउन सक्छ। यसले कुनै पनि अत्यधिक जाँचमा पनि राख्न सक्छ तपाईंको खोपडीमा तेलको उत्पादन ।
एक चम्मच नींबू को रस को एक जोडी लिनुहोस् र यसलाई आफ्नो स्क्याल्पमा लागू गर्नुहोस्, यसलाई लगभग -10-१० मिनेटको लागि छोड्दै। त्यसपछि पानीमा केही कागती रस मिसाउनुहोस् र सामान्य रूपमा कपाल धुने अघि बढ्नु अघि निम्बूलाई कुल्ला।
सुझाव: १ lemon मिनेट भन्दा लामो कपालमा निम्बू नराख्नुहोस् र प्राय: यसो गर्नबाट जोगिनुहोस् किनकि निम्बू ब्लीचिंग एजेन्ट हो र कपाल सेतो हुन सक्छ।
जब सबै विफल हुन्छन्, एन्टिसेप्टिक तरल पदार्थको प्रयोग गर्ने विचार गर्नुहोस् जस्तै डेटटोल वा साभलोन। यी कपालमा थोरै कठोर हुन सक्छन् तर प्रभावकारी हुन सक्छन्।
पानीमा तपाईको छनौट एन्टिसेप्टिकको ठूलो चम्चा भन्दा बढि मिक्स गर्नुहोस्। लक्ष्यको अनुपात १: or वा १:। हो। यो स्क्याल्पलाई आधा घण्टाको प्रि-शैम्पूको लागि वा पाँचदेखि १० मिनेट पोस्ट शैम्पूको लागि भिज्न सकिन्छ र त्यसपछि पानीले धोइन्छ।
नबिर्सनुहोस्, यो एकदम कडा हुन सक्छ र त्यसैले हप्तामा एक पटक भन्दा बढि सल्लाह दिइन्छ।
सुझाव: धेरैले डन्ड्रफलाई नियन्त्रण गर्न माउथवाशको पनि कसम खान्छन्, जसले जिद्दी डन्ड्रफको लागि पनि काम गर्दछ।
अन्य उल्लेखनीय उल्लेखहरू एलोवेरा जेल हुनेछ, चिया रूखको तेल , जैतुनको तेल, र तुलसी पातहरू।
At-Home Dandruff Remedies FAQs
Q. यीका प्रभावहरू हुन् घरेलु उपचार स्थायी?
TO यो याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि एक पटक यो डन्ड्रफ बन्दै रहन्छ। तपाईको डन्ड्रफलाई के कारणले ट्रिगर गर्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउन यो धेरै बुद्धिमानी हुन सक्छ, केहिको लागि यो मौसम हुन सक्छ, अरूलाई यो जिममा पसिना आउन सक्छ। डन्ड्रफको लागि तनाव पनि प्रमुख योगदानकर्ता हुन सक्छ। केवल प्रयास गर्नुहोस् र खोपडी सफा राख्नुहोस्, कपाल नुहाउन प्रत्येक days दिन पछि राम्रोसँग राख्नुहोस्, र ट्रन्डरहरूको काउन्डर खोल्नुहोस्।
Q. कुनै घरेलु उपचारले काम गरिरहेको छैन जस्तो देखिन्छ, के म केहि गलत गर्दैछु?
TO धेरै जसो घरेलु उपचार दीर्घकालीन परिणामहरूमा टुक्रिने स्थिरता मार्फत मात्र। टाउको सफा राख्नु पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि त्यहाँ अन्तर्निहित स्वास्थ्य मुद्दाहरूको पनि सम्भावना हुन्छ जस्तै कमजोरीहरू तपाईंको डन्ड्रफको कारण हो। जान्नुहोस् कि जब डन्ड्रफ हातबाट बाहिर हुँदैछ र चिकित्सा ध्यानबाट फाइदा लिन सक्छ।
अनुहारको एक्नेको लागि बेकिंग सोडा
कसरी डबल चिन व्यायाम बाट छुटकारा पाउने
उखुको रस तातो वा चिसो हो
कसरी कपालको विकासको लागि बदामको तेल प्रयोग गर्ने
डन्ड्रफ र हेयरफलका लागि उपचार